Wararka Maanta: Jimco, Sept 8 , 2017-Degmadda Waaberi oo caawa ku guuleysatay tartanka kubadda-cagta ee degmooyinka Gobolka Banaadir 2017
Laacibka kooxda Waaberi ee lagu magacaabo Muxudiin, ayaa si weyn uga dhex-muuqday ciyaarta, waxaana qeybtii hore ee kulanka uu dhaliyay labo kamid ah goolashii ay kooxdiisu ku adkaadeen.
Waaberi ayaa kulankii ugu dambeeyay ee Sami final-ka waxay soo reebtay Degmada Hilliwaa, halka Hodan ay soo garaacday Kaaraan.
Magaalladda Muqdisho xili habeen ah kubad-cag oo heerkan oo kale in lagu ciyaaro waxaa ugu dambeysay 30-sano ka hor, sida xiriirka kubadda-cagta uu sheegay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Taabit Cabdi Maxamed, guddoomiyaasha labada degmo ee caawa ciyaareysay, mas’uuliyiinta xiriirka kubadda-cagta Soomaaliya iyo dad ku dhow hal million oo qof, ayaa daawaneysay, kulankii caawa oo ahaa mid si xamaasad leh ku bilowday.
Xiriirka kubadda-cagta adduunka ee FIFA, ayaa boggaadiyay hormarka Soomaaliya ka jira, ee dhinaca ciyaaraha.